Top 5 dòng sữa dưỡng thể Love Beauty and planet tốt nhất | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 dòng sữa dưỡng thể Love Beauty and planet tốt nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 dòng sữa dưỡng thể Love Beauty and planet tốt nhất | Muasalebang in Muasalebang
Kuyabonakala ukuthi yonke imicimbi yasebusika iyafika, ubisi lomzimba isiphenduke “ukudla” okubalulekile kwesikhumba sodadewethu. Phakathi kwemikhiqizo eminingi, Thanda uBeauty kanye nePlanethi yokugcoba umzimba kusibuyisela ebumnandini nasekupholeni kwendalo. Ukuze sikusize ukhethe umkhiqizo ofanele, isihloko esilandelayo sizokusiza Buyekeza izigcobo zomzimba ezihamba phambili ezingu-5 ezihamba phambili ze-Love Beauty kanye nePlanethi Ngiyacela.
1 Mayelana ne-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion brand
2 Ingabe kufanele ngikhethe i-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion?
3 Top 5 best Love Beauty and Planet body lotions
3.1 3.1 Thanda Ubuhle NePlanet Murumuru Butter & Rose Body Lotion (epinki)
3.2 3.2 Thanda Ubuhle NePlanethi Amafutha Argan & Lavender Body Lotion (purple)
3.3 3.3 Thanda Ubuhle Neplanethi Amanzi Kakhukhunathi & I-Mimosa Flower Body Lotion (eluhlaza)
3.4 3.4 Thanda Ubuhle Neplanethi Ehlanzekile Yolwandle I-Body Lotion (eluhlaza okwesibhakabhaka)
3.5 3.5 Thanda Ubuhle kanye Neplanethi Ecwebezelayo Yokugcoba Ngomzimba Wokugcoba (Omhlophe)
4 Ungayisebenzisa kanjani i-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion ngempumelelo
Mayelana ne-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion brand
Eqinisweni, i-Love Beauty nePlanethi inikeza imigqa yomkhiqizo ngenhloso yokukwazi kokubili ukuhlobisa nokuvikela imvelo kanye nomhlaba. Lolu wuphawu lwezimonyo lwemvelo lwaseMelika oludumile, lwase lwenziwa futhi lwakhangiswa ngabakwa-Unilever ngoDisemba 2017. Ngo-2019, lolu hlobo selusabalalise ngokusemthethweni imikhiqizo eVietnam futhi ngokushesha lwazuza ukwethenjwa kwabesifazane baseVietnam.
Ngaphezu kwalokho, i-Love Beauty And Planet ayigcini nje ngokugqamisa ubuhle bakho kodwa futhi ifaka isandla ekunciphiseni imiphumela emibi emvelweni. Ngakho-ke, imikhiqizo yenkampani ikhishwa izithako zemvelo eziphephile nezivaliwe. Lezi zithako zonke zinokunakekelwa okusebenzayo kwezinwele nomzimba wakho. Futhi i-Love Beauty ne-Planet body lotion ingenye yemikhiqizo evelele yenkampani ethandwa abasebenzisi abaningi.
Ingabe kufanele ngikhethe i-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion?
Ukuze uphendule umbuzo ngendlela efanele Ingabe kufanele ngikhethe i-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion? Ake sibheke okunye okugqamile kwayo.
Mayelana nokuklama, i-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion inomklamo omkhulu webhodlela le-cylindrical, eliqine ngokwedlulele esandleni. Ikakhulukazi, ibhodlela liyipulasitiki ebonakalayo ngokuphelele engabona izithako ngaphakathi. Nakuba, ibhodlela lisaguqubele kancane ngenxa yezinto ezigaywe kabusha ezingu-100%, kodwa ungakhathazeki kakhulu ngaleli phuzu. Enye iphuzu elihlanganisayo lale lotion yomzimba ukuthi umlomo wombhobho ukulungele kakhulu ukuthola izithako.
Njengamanje, umkhiqizo unezinguqulo ezi-5 ezihluke kakhulu ezinemiphumela ehluke kakhulu, amakha kanye nohlu lwezithako. Ngakho-ke, ungakhetha ngokukhululekile umkhiqizo ngokusho okuthandayo.
Akukhona lokho kuphela, ezinguqulweni ezingu-5 ze-Love Beauty ne-Planet body lotion, zonke ziqukethe amafutha kakhukhunathi wemvelo kanye namafutha kabhontshisi wesoya. Lezi zithako zine-antioxidant esebenza kahle kakhulu kanye nomphumela wokuthambisa esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, ezinye izithako ziyi-vegan futhi azikaze zihlolwe ezilwaneni zasendle.
Ikakhulukazi, izithako ze Love Beauty and Planet review body lotion Zonke azinawo amaSilicone, amaParabens, amaSulfate nama-synthetic colorants. Ngenxa yalokho, ungakwazi ukwethemba ngokuphelele isikhumba sakho, ngisho nesikhumba esibucayi.
Elinye iphuzu elibalulekile ukuthi i-Love Beauty kanye ne-Planet skin white lotion yomzimba inokubuyekezwa okuhle ngoba iphunga limnandi, alinamandla kakhulu, kodwa lihlala esikhumbeni isikhathi eside. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo unamandla okungena ngokushesha esikhumbeni, futhi unganamatheli kakhulu.
Okunye okugqamile intengo ethengekayo, kulula ukuyithola nokuthenga imikhiqizo yangempela eVietnam. Njengamanje, i-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion ithengiswa nge-175,000 VND ngebhodlela le-400ml. Le ntengo ithathwa njengethengekayo, ifanele iningi labathengi baseVietnam.
Kodwa-ke, okubi kwe-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion ukuthi umthamo womkhiqizo mkhulu kancane, ngakho-ke kungase kube nzima uma uhamba.
>>>Funda kabanzi: [Review] Ingabe i-Louv Cell Body Lotion ilungile? Malini
Top 5 best Love Beauty and Planet body lotions
I-Love Beauty nePlanethi yethule imigqa emi-5 yezigcobo zomzimba ezinemibala emi-5 ehlukene kanye nephunga elimnandi. Imininingwane ye-lotion ngayinye yomzimba imi kanje:
3.1 Thanda Ubuhle NePlanet Murumuru Butter & Rose Body Lotion (epinki)
Okokuqala, nini Ukubuyekezwa kwe-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion ke asikwazi indiva iphunga rose yakhelwe zonke izinhlobo zesikhumba, ikakhulukazi isikhumba esomile. Umkhiqizo unezithako ezikhishwe kuma roses akhethwe ngokucophelela esifundeni se-Aroma kuhlanganiswe nengqikithi yebhotela le-shea le-MuruMuru. Ikakhulukazi, i-rose oil isiza ukuthambisa, i-antibacterial kanye ne-antioxidant esikhumbeni. Futhi amafutha ebhotela le-shea anamandla okugcina umswakama, okwenza isikhumba sithambile futhi sibushelelezi.
Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo wobisi womzimba we-Love Beauty kanye nePlanet nawo uqukethe uwoyela kabhontshisi waseMelika, amafutha kabhekilanga – iHelianthus Annuus Seed Oil equkethe amavithamini A, D, E kanye nezakhamzimba ezondla futhi zikhanyise isikhumba.
Ukusetshenziswa okuvelele kwe-Love Beauty And Planet body lotion rose ngephunga ukusiza ukuthambisa isikhumba amahora angama-24. Ngesikhathi esifanayo kusiza ukukhanyisa isikhumba, bushelelezi futhi sithuthukise isikhumba esomile, esiqhekekile. Ngaphezu kwalokho, i-Love Beauty kanye nePlanethi yokubuyekeza i-lotion yomzimba isebenza kahle ngokwekhono lokulwa namagciwane, ivikela isikhumba kuma-ejenti ayingozi emvelweni. Ikakhulukazi i-anti-oxidant, ivimbela ukuguga kwesikhumba futhi ivuselele isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 175,000 VND/400ml.
>>> Bona okuningi: [Review] I-Bath And Body Works inuka liphi iphunga lolotion womzimba?
3.2 Thanda Ubuhle NePlanethi Amafutha Argan & Lavender Body Lotion (purple)
Kungaba iphutha ukungakhulumi ngo-Love Beauty And Planet Argan Oil & Lavender ngokukhethekile emantombazaneni aphuphayo nanothando. Lo mkhiqizo unenhlanganisela eyingqayizivele yamafutha abalulekile e-Lavender kanye ne-Argan. Ikakhulukazi, amafutha e-lavender abalulekile – I-Lavandula Angustifolia Amafutha asiza ukunciphisa ukuvuvukala, ukunciphisa ukucasuka kwesikhumba futhi anciphise isikhumba. Futhi uwoyela we-Argan – I-Argania Spinosa Kernel Oil ine-anti-oxidant, anti-acne, kanye nezindawo zokulwa nokuguga.
Ukusetshenziswa okuvelele kwalo mkhiqizo we-Love Beauty kanye nePlanethi ukuthambisa isikhumba ngempumelelo amahora angama-24. Ngesikhathi esifanayo, ukuhlinzeka ngezakhi zokondla nokuthambisa isikhumba kusuka ekujuleni kwangaphakathi, ukuvimbela isikhumba esomile esiqhekekile ebusika. Ikakhulukazi, iphinde ivimbele ukuguga, ukulwa nokuvuvukala futhi iphathe ngokuphumelelayo induna emzimbeni. Akukhona lokho kuphela, iphunga elimnandi, elimnandi le-lavender elivela eFrance liletha izikhathi zokuphumula ezingalindelekile. Lo mkhiqizo uklanyelwe ngokukhethekile isikhumba esomile.
Intengo yesithenjwa: 165,000 VND / 400ml ibhodlela.
>>> Bona okuningi: [Review] Ingabe i-Hatomugi body lotion ilungile? Malini?
3.3 Thanda Ubuhle Neplanethi Amanzi Kakhukhunathi & I-Mimosa Flower Body Lotion (eluhlaza)
Esinye sesibuyekezo esihle se-Love Beauty ne-Planet body lotions i-Coconut Water & Mimosa Flower. Umkhiqizo uyinhlanganisela yamanzi ahlanzekile kakhukhunathi nezimbali zeMimosa. Kuyo, amanzi kakhukhunathi ahlinzeka ngezakhi ze-antioxidant esikhumbeni. Futhi i-Mimosa flower extract – I-Acacia Decurrens Flower Extract inomphumela wokwenza isikhumba sithambile futhi sibushelelezi.
Ubisi Love Beauty and Planet review body lotion kuhle impela ngokwekhono lokusiza isikhumba bushelelezi, sigcwele ubungqabavu bosuku olusha. Ngesikhathi esifanayo, ukondla nokuthambisa isikhumba kanye nokuvimbela i-oxidation, i-antibacterial ivikela isikhumba. Ikakhulukazi, ivuselela amabala amnyama, isiza ukuvuselela isikhumba.
Okugqamile ukuthi umkhiqizo unephunga elisha, elithambile likakhukhunathi. Ukusuka lapho, ukudala umuzwa wokuvumelana nemvelo, ukuphumula nokugcwele ubungqabavu. Lokhu kuthathwa njengokukhetha okufanele kulabo abanesikhumba esomile, esiphelelwe amanzi emzimbeni.
Intengo yesithenjwa: 160,000 VND / 400ml ibhodlela.
>>> Reference: Top 6 best ST Ives body lotions ezithandwa abantu besifazane
3.4 Thanda Ubuhle Neplanethi Ehlanzekile Yolwandle I-Body Lotion (eluhlaza okwesibhakabhaka)
Ikhuthazwe yi-Blue Ocean, i-Love Beauty kanye ne-Planet Clean Oceans Edition inikeza iphunga likasawoti elinosawoti kanye nephunga elimnandi lolwandle. Izithako Usawoti wasolwandle i-Bali usiza i-antibacterial esikhumbeni, unikeze izakhi zesikhumba esinempilo. Ngaphandle kwalokho, i-green algae ekhishwe isiza i-anti-oxidant, ibambezela inqubo yokuguga kwesikhumba. Futhi ukukhishwa kwe-Bergamot kuzosiza i-antibacterial, anti-inflammatory, ithobise ukucasuka.
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kuqukethe amafutha kakhukhunathi we-Organic ukusiza ukuthambisa isikhumba, ukuvimbela isikhumba esomile esiqhekekile. Ngesikhathi esifanayo, i-eucalyptus flower extract izosiza ukulinganisela nokubuyisela isikhumba esimnyama.
Ukusetshenziswa okuvelele kwe Thanda uBeauty kanye nePlanethi yokugcoba umzimba Lokhu kwenzelwa ukugcina isikhumba simanzi kuze kube amahora angama-24, sithambile futhi sisisha. Ikakhulukazi, ibambezela inqubo yokuguga yesikhumba, ivuselela isikhumba esibushelelezi nesinamandla. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ulungele zonke izinhlobo zesikhumba, ikakhulukazi ezomile, isikhumba esingaphili.
Intengo yesithenjwa: 180,000 VND/400ml.
>>>Funda kabanzi: [Review] Ingabe i-White Conc yokugcoba umzimba wokugcoba ilungile?
3.5 Thanda Ubuhle kanye Neplanethi Ecwebezelayo Yokugcoba Ngomzimba Wokugcoba (Omhlophe)
Ekugcineni uma kuziwa Top 5 best Dove Beauty and Planet body lotions I-Luscious Hydration ayikwazi ukuzitshwa. Isithako esiyinhloko salo mkhiqizo amanzi ahlanzekile kakhukhunathi ahlanzekile avela ePhilippines, esiza ukukhulisa izinga lokushisa kanye nokondla isikhumba esimhlophe. Ngaphandle kwalokho, ukukhishwa kwembali ye-mimosa kutholakala ngokuqhubekayo e-Morocco, ngaphandle kwekhono layo lokuswakama, futhi kusiza isikhumba ukuthi sihlangane nephunga elimnandi lezimbali.
Le lotion isiza ukugcwalisa isikhumba ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, ngephunga elimnandi lembali ye-mimosa, liyasiza ukuphumuza isikhumba nengqondo. Ngaphezu kwalokho, i-creamy texture imhlophe ngombala kodwa imunca kalula, ingashiyi ifilimu emhlophe. Ngakho-ke, umkhiqizo ufanelekile esikhumbeni esomile noma usetshenziswe ebusika.
Intengo yesithenjwa: 175,000 VND / 400ml ibhodlela.
>>> Bona okuningi: [Review] Top 5 best Purite body lotions for women
Ungayisebenzisa kanjani i-Love Beauty kanye ne-Planet body lotion ngempumelelo
Kufanele usebenzise umkhiqizo oqediwe ngokulinganayo esikhumbeni somzimba kusukela kwesinye kuya kwezimbili ngosuku. Kufanele isetshenziswe ngokushesha ngemva kokugeza, lapho isikhumba sisesezingeni lokushisa ukuze umkhiqizo oqediwe ukwazi ukumunca ngokushesha futhi wome esikhumbeni.
Ngaphandle kwalokho, kufanele usebenzise izithako zokukhipha i-exfoliating kusukela kweyodwa kuya kwamabili/ngesonto. Lokhu kuzosiza ukuvula ama-pores ukuze ukugcoba komzimba kuphumelele kakhulu.
Qaphela ukuthi uma ugcoba i-Love Beauty ne-Planet body lotion, kufanele ufake amachashaza esikhumbeni ofuna ukusigcoba, bese umbambatha esikhumbeni ukuze izithako zisakazeke ngokulinganayo ngaphambi kokumasaja kancane. Lokhu kuzosiza umkhiqizo ophelile ukuba wome ngokushesha futhi ngokulinganayo.
Ikakhulukazi, kufanele futhi usebenzise ama-gel amaningi okugeza kanye nezikhuhla zomugqa ofanayo ukuze uzuze ukusebenza okuhle kakhulu.
Ngenhla kunendatshana ongabelana ngayo mayelana nomugqa womkhiqizo Thanda uBeauty And Planet body lotion okuncono. Ngethemba ukuthi lokho kungakunikeza ulwazi oluwusizo uma udinga ukusebenzisa lo mugqa womkhiqizo wobisi omanzi.
Xem Thêm Top smartphone chạy chip Snapdragon 855+ “ngon” nhất | Muasalebang
Nguyên nhân khiến da bị cháy nắng 4 cách làm dịu da hiệu quả | Muasalebang
Đánh giá TOP 7 ổ cắm Panasonic tốt và được ưa chuộng nhất hiện nay | Muasalebang